Kedu ihe ndabere backlink site na Backlinko?
Backlinks na-aga n'ihu na-agba ọsọ ụwa dijitalụ, n'agbanyeghị isiokwu ụfọdụ na webmasters na-agwa anyị ihe ndị ọzọ banyere ha. N'ezie, nchọpụta nyocha ikpeazụ nke search engine na-egosi na backlinks bụ otu n'ime ihe ndị kachasị dị mkpa maka Google na engines ndị ọzọ.
Mgbe a bịara ijikọta ụlọ, e nwere ọtụtụ ụzọ nyocha na-ezi dị. Ụfọdụ n'ime ha na-agbaso ntuziaka Google, ebe ndị ọzọ na-emerụ ha - corbatas amarillas. N'ụbọchị anyị, ụfọdụ n'ime njikọ ndị na-emepụta usoro na-abaghị uru n'oge anyị (f. e. ezipụ ndị ọbịa ma ọ bụ ikwughachi backlinks). Otú ọ dị, a ka nwere ọtụtụ ụzọ a na-amaghị ama ma ọ bụ n'okporo ụzọ iji nweta ndị na-enweghị azụlink free.
N'isiokwu a, m ga-eso gị kọọrọ ọtụtụ usoro ụlọ usoro njikọ, ụfọdụ n'ime ha ka m gbaziri n'aka Brian Dean Backlinko nwe. Ka anyị lebakwuo anya na nke ọ bụla n'ime ha.
Ụzọ iji nweta backlinks n'ihi usoro Backlinko
Usoro njikọ ụlọ ọrụ
iji nweta njikọ sitere na mgbasaozi mmadụ. Dịka usoro a si dị, ị ghaghị ịkekọrịta ọdịnaya dị mkpa ma mụta ihe dị na ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ dị gị mkpa ịbịaru ndị ọrụ bụ ndị buru ụzọ kesaa ọdịnaya a ma nye ha ihe ọhụrụ ma ọ bụ ka ọ dị ọhụrụ.
Usoro ụlọ nkà na mgbaaka
Brian Dean zụlitere nkà ụlọ a Skyscraper. O nyeere ya aka ịmalite njem okporo ụzọ ya site na ihe karịrị 400%. Dịka usoro a si dị, ịkwesịrị ịchọpụta ọchụchọ nchịkọta dị elu na ịchọta otu ọdịnaya nke dị n'etiti ndị ọrụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-ede ya nke ọma maka otu ọchụchọ ahụ. Jide n'aka, nsụgharị ọhụrụ nke ọdịnaya ahụ bụ ihe pụrụ iche na nyocha. Iji mezue usoro ụlọ njikọ a, ịkwesịrị ịkwalite ọdịnaya a na-emelite na mgbasa ozi na ihe mgbaru ọsọ ụfọdụ ngalaba ngalaba PR ndị dị elu emesị jikọta gị azụ.
Akaebe jikọtara usoro ụlọ
Akaebe bara uru maka azụmahịa ọ bụla ka ha na-egosi ahịa afọ ojuju maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ụlọ ọrụ na-enye. Webmasters na-achọ ha ka ha mara uru ha nwere ike iwetara na ụlọ ahịa ha n'ịntanetị. N'ụzọ dị otú a, ịmepụta nyocha gị na-enye ohere ndị magburu onwe ha iji nweta onwe gị njikọ njikọ na-adịrị mfe ma dị ike. Ndị ọrụ na-adọta ụlọ ọrụ dị mma karịa ndị na-enweta nyocha nke spammy (dị ka a na-achịkwa ndị dị otú ahụ nwere ike ịchọta ngwa ngwa). Nlekọta ezi nyochaa na saịtị gị nwetara, nke ka elu ọ ga-adabere na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ. Ọzọkwa, o yiri ka a pụrụ ịtụkwasị obi maka azụmahịa ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere ha ga-ejikọta na saịtị gị n'ebughị ị rịọ.
Ihe niile ị ga-eme bụ ịhọrọ ngwaahịa ịchọrọ kachasị ma kpọtụrụ onye na-eweta ọrụ iji nye gị akaebe na nke a ngwaahịa a. Ọtụtụ n'ime nnukwu ụlọ ahịa azụmaahịa nwere akwụkwọ nlekọta pụrụ iche maka nzube a. Ọ bụ ya mere ọ ga-adịrị gị mfe itinye akwụkwọ nyocha gị site na ebe nrụọrụ weebụ ha.
Nke a na-esite n'aka onye nwe ụlọ obibi Backlinko, Brian Dean.